बिदेसमा कालो पुती चिके - Nepali Sex Tube
म इन्टर पास गर्ने बित्तिकै साथिहरुको लहै लहै मा लागेर बिदेस मा काम गर्न भनि दुबई मा पुगेकि थिय। हुनत डुबै को यक प्रटिस्ठित मेग मार्केट को क्यासियर को काम थियो र तलब पनि राम्रो नै थियो। तर दुबई जानु भन्दा पहिला देखि नै मलाई यहा नेपाल मा जस्तो रमाईलो गर्न पाईदैन होला सधै काम काम भन्दा भन्दै दुई बर्स बिना मस्ति नै बिताउनु पर्ला भन्ने लागि रहेको थियो। हुन पनि मुस्लिम देस मा नियम कानुन कति कडा हुन्छ भनेर साउदि तिर गयेर आयका मान्छे हरुले बतायका थिय। जे होस मेरो मन मिल्ने ३-४ जना सथिहरु पनि यहि क्यारिफोर मा नै काम गर्ने भयेका ले म केहि ढुक्क थिये।
नेपाल मा हुदा मैले १५ बर्स देखि नै केटा साथि हरु सङग सम्बन्ध राख्दै आयेको थिय । आज १९ बर्स हुदा सम्म मेरो २ जना केटा साथि हरु सङग सम्बन्ध गासिई सकेको थियो। मेरो घनिस्ट केटा साथि हरु सङग मेरो सबै थोक चल्दथ्यो जस्तो कोहि पति पत्नि। तेसैले मेरो बेला बेला मा काम तृस्णा मेट्नको लागि नेपाल मा कुनै दुख थियेन। तर यहा दुब ई मा आये पछि १-२ महिना सम्म त मैले कुनै केटा मान्छे सङग बोलन पनि पायेकि थिईन। सग्गै काम गर्ने फिलिपिनि हरु कहिले काहि काम बिसेस ले बोल्ने गर्थे नत्र अरु कोहि थियेनन्।
समय बित्दै गयो १ दिन नेट मा यहि लुकेको समाज मा भयेका कथा पढि राखेको थिये यौटा कथा दिपक थापा ले लेखेको रहेछ।। कथा पढदा उ पनि डुबै मा नै बस्ने रहेछ जस्तो लाग्यो। उस्ले बिना हिचकिचाहट आफ्नो ईमेल आईडि पनि [email protected] भनेर लेखेको रहेछ।
र केटि साथि हरु खोजि रहेको पनि लेखेको रहेछ। मैले नै चेक गर्न १ दिन मेल गरे र फोने नम्बर पनि लेख्न भने। मेल को तुरुन्त रिप्लाई आयो र साथ मा फोन नम्बर पनि। मैले १ दिन फोन गर्ने हिम्मत गरे तर १-२ रिङग जदैमा फोने काटिदिय। त्यो दिन तेसै भयो भोलि दिन मा हो केरे उता बाट फोन आयो। त्यो दिन उस्ले सोध्यो ईङ्लिस मा कि यो नम्बर बाट मिस कल आयेको थियो केहि मदत गर्न सक्छु कि भनेर। मैले भने होइन नम्बर दिपक जि को हो कि होइन भनेर खलि चेक् मात्रै गरेको हु ।
उस्ले आफु दिपक नै बोलेको हु भन्दै यो नम्बर कहा बाट पायको भन्न थल्यो। मैले पहिला त भनि दिय कि सथिहरुले दियेको तर फेरि भने कि तपाई ले नै मेल मा पथाउनु भको नि।।।। अब उस्लाई अडकल लगाउन धेरै बेर लागेन। र सिधै भन्न थल्यो कि कुनै दिन भेटु न। मैले भने तपाईको जस्तो कहा फुर्सद छ र मेरो त सुक्रबार पनि काम चल्छ भने। उस्ले भन्यो फुर्सद वा बिदा को दिन मा त भेट गर्नै पर्छ भनेर जिद्दि गर्न थल्यो। हुन पनि मेरो त्यतिबेला काम पनि प्रार्य सधै नै फुल थियो १ हप्ता हामिले फोन मा नै कुरा गरेर बितायोउ। फेसबुक बाट पनि च्याट गर्न थलेका थिय।
फेस बुक का फोटो हेर्दा उ निकै ह्याड्सम त्यस्तै २४-२५ बर्सको देखिन्थ्यो। पेसा ले उ मेकानिकल ईन्जिनियरिङ गरेको भन्थ्यो। कुनै फ्याक्टृ मा टेक्निकल सपोर्ट को काम गरि रहेको थ्यो। १ महिना पछि होला, त्यस्तै ईद को ४ दिन पछि मेरो पनि ईदको छुट्टि ३ दिन हुने भयो। किनकि इदमा त हाम्रो फुल ड्युटि भयेको थियो। मैले नै भने म ३ दिन फ्री छु। अब उस्ले नै कर् गर्न थल्यो जसरि भये पनि भेट्ने भनेर। मैले पनि हुन्छ भने। मलाई पनि लग्भग ५ महिना त्यस्तै बिताउन गर्हो परि रहेको थियो। भोलि पल्ट उस्ले १२ बजे पछि बर डुबै को कुनै नेपालि होटेल मा भेट्ने कुरा गर्यो मैले पनि हुन्छ भने। मलाई त्यो रात किन हो किन निदाउन धेरै गर्हो पर्यो। हामि आखिर त्यो नेपालि होटेल को १ स्पेसल रुम मा आखिर डुबै जना यक आपसमा मिल्योउ।
हुन पनि उ त्यतिकै ह्याडसम रहेछ। म मन मनिअ खुसि भये र हाम्रो कुरा बढ्न थल्यो। बाकि कुरा जे जे भये पनि उस्ले नै कुरा आगडि बदाउडै मेरो नजिकै टासियर बस्न आयो। हामि डुबै को मान्सिकता मा नै आज पुरा काम तृस्णा मेट्ने चाहाना भयेको ले हामि लाई त्यति असहज लागेको थियन। उस्ले नै भन्यो तेसो भये ५ महिना देखि सुक्खा नै हो? मैले भने मेरो त हो तपाईको नि उस्ले नि भन्यो २ महिना भयो मेरो पनि त्यस्तै हाल् छ। अब का दिन हरु भने धेरै तड्पियर बिताउनु न्पर्ने भो भन्दै मेरो
स्तनमाथि कुहिनो राखेर धक्का दिन थाल्यो. मलाई कताकता कुतकुती लागि रहेको थियो र मेरो आङ्ग पनि सिरिङ्ग भई रहेको थियो ।
सायद धेरै महिना मा कोहि केटा मान्छे देखेर होला। म भरखर१ ९ वर्ष पुगेकी तरुनी युवती भएकी र ५ महिना सम्म कोहि केटा को स्पर्स नपायर हो कि किन हो मलाई कस्तोकस्तो अनुभव भइरहेको थियो । मेरो स्तन पनि ठूलो र साह्रो थियो । मैले स्तनमा कसिलो ब्रा लगाएको हुँदा मेरो टि सर्टबाट स्तन माथि उठेको थियो । पुष्ट स्तन भएकोले उसको कुहिनोले मेरो स्तनमा धक्का दिदाँ मलाई कताकता आनन्द भए जस्तो लाग्न थाल्यो
केहि बेर पछि दिपक लाई पनि खपी नसक्नु भइसकेको रहेछ । उसले त अव कुहिनोले स्तनमा धक्का दिन छोडेर दुबै हातले मेरो कसिलो स्तनमाड्न थाल्यो । अब भने मलाई पनि खपी नसक्नु भयो । मेरो पुतीबाट पानी बगेर मेरो पेन्टी पुरै भिजेर मेरो पेन्टमा समेत लाग्न थाल्यो । उसले मेरो स्तन माड्दै मेरो टि सर्ट खोल्यो अनि कोठाको ढोका लगायो र मलाई विस्तारै ओछ्यानमा सुतायो । उसले मेरो पेन्ट पनि खोलिदियो । अब मेरो शरीरमा लुगा टु पीस मात्र बाकी रह्यो ।
उसले मेरो रातो ब्रा भित्र रहेको ठूलो र माथि उठेको कसिलो स्तन एकटकले हेर्यो र उसको हातले मेरो हात समाती उसको लाडोमा राख्यो । अनि विस्तारै ब्रा माथिबाट माड्न थाल्यो । घरिघरि मेरो हात समातेर लाडोमा दल्न थाल्यो । उसले मेरो स्तन माड्दै तल पुतीमा पनि खेलाउँन थाल्यो ।केहीबेरमा उसले उसको जम्म ै लुगा खोल्यो । उसको लाडो ठनक्क भएर ठन्केको थियो
एकछिन पछि उसले मेरो ब्रा र पेन्टी दुवै खोल्यो र अव म पुरै नाङ्गो भएको थिए उ पनि नाङ्गै थियो । उसले मेरो दुधको मुन्टा खेलाउँदै चुस्न थाल्यो र उसको ठन्केको लाडो पनि मेरो मुखमा दल्न थाल्यो ।अनि उसले मेरो दुवै खुट्टा फटाएर पुती चुस्न थाल्यो । अव भने मलाई सही नसक्नुभयो । मैले उसको बेस्करीठन्केको लाडोलाई मेरो मुखमा ग्वाम्मै हालेरचुस्न थाले । उसले मेरो पुती चुस्न थाल्यो, म उसको लाडो चुस्न मस्त रहें ।
केही बेर त्यसो गरेपछि उ म मािथ चढ्यो र उसको अत्यन्त ठन्केको लाडो मेरो पुतीमा हाल्न थाल्यो । उसले लाडो मेरो कसिलो पुतीमा छिरायो र माजाले भित्र बाहिर गर्न थल्यो। आहा ५ महिना मा गर्दा पनि लागि रहेथ्यो कि पहिलो पटक जस्तो. उसले मेरो दुवै दुधको मुन्टा चुस्दै ग्वाम्ग्वाम हाल्न थाल्यो र दुवै हातले मेरो पिठ्यूमा च्याप्प समात्यो अनि मैले पनि दुवै खुट्टा फटाएर उसलाई तलबाट धक्का दिदैं अगाँलोमा कसें । मैले दुब मैले दुबई मा आयेर पनि यति मजा हुन्छ र आनन्द हुन्छ भन्ने कुरा सपनामा पनि सोचेकी थिइन ।
यसरी हामीले घरी उ माथि घरी म माथि भएर ग्वाम्ग्वाम चिक्यौं । लगभग १० मीनट चिकेपछि उसले उसको लाडोबाट सेतो पानी मेरो नाइटो वरिपरि झारिदियो । मेरो पुती पुरै पानीले भिजेर च्यापच्याप भएको थियो । उसलाई पनि स्वर्गीय आनन्द भएछ र मलाई पनि यस्तो स्वर्गीय आनन्द भयो कि त्यस्तो आनन्दको त वर्णन पनि गर्न सकिदैन । त्यो दिन हामिले बेलुका ८ बजे सम्म ४ पटक चिक्योउ। बाकि २ दिन् पनि त्यहि होत्टेल मा नै बिताउने निर्णय गरेर हामि आफ्नो आफ्नो कोठा तिर लग्योउ।
मेरो पुती पुरै पानीले भिजेर च्यापच्याप भएको थियो